Prince Harry wuxuu baxshay iyada oo aan uur lahayn Meghan Markle, ilmihiisii ​​royal ee ku dhaley IMMINENT - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Prince Harry wuxuu baxshay iyada oo aan uur yeelin Megan Markle, oo ah wiilkiisa boqollaalkiisa ah oo mataana IMMINENT
Prince Harry wuxuu baxshay iyada oo aan uur yeelin Megan Markle, oo ah wiilkiisa boqollaalkiisa ah oo mataana IMMINENT
Ninka dhalinyarada ah ee 34 wuxuu u muuqday mid si xamaasad leh u daawaday markii uu soo dhaweeyay taageerayaasha London (Sawirka: PA)
Dhallinta, laga bilaabo dhegta ilaa gabadhiisa Haweeney Mareykan ah, 37, waxay dhagaysatay markii ay soo dhaweysay taageerayaasha London ka hor intii aysan furin xarun dhallinyaro ah oo ku taal caasimadda. Waxay salaamay oo waxay is qabsatay dad badan oo ka baxsan astaanta. Barking iyo Dagenham 'Future' Zone Youth, oo ah aabbaha mustaqbalka ayaa u muuqday bouncy. Waxa sidoo kale lagu sawiray qosol iyo qosolka shaqaalaha xarunta, oo ay abuurtay Charity OnSide oo ah goobaha dhallinyarada oo keliya, waana kan ugu horreeya saddexda inuu furo 2019.
Arrintan ayaa timid ka dib markii Duke iyo Duchess of Sussex ay ku dhawaaqeen in aysan u muujin doonin rabitaankooda ah inay soo galaan ilmaha Sussex.
Xoogagga boqortooyadu waxay qaadeen "go'aan shakhsi ah" oo aan lagu faahfaahin faahfaahinta ku saabsan qashinka, kaas oo ku sii jiri doona meel toddobaad ilaa uu ka helo waqti "si gaar ah u dabaaldeg".
Qoyskooda ayaa ku yiri hadal uu soo saaray: "Duke iyo Duchess of Sussex aad ayay uga mahadcelinayaan naxariista UK iyo adduunkaba maadaama ay diyaarisay inay soo dhaweyso ilmaheeda.
Aabaha mustaqbalka waa niyad fiican (Sawirka: PA)
"Awooddooda Boqortooyada waxay go'aan ka gaareen in aysan qorsheynin qorshayaashooda marka ay imaanayaan ilmahooda.
"Duke iyo Duchess waxay jecelyihiin inay la wadaagaan warkan xiiso leh qof walba marka ay fursad u helayaan inay si gaar ah ugu dabaaldegaan qoyskooda cusub."
on Meghan ayaa laga yaabaa inay tagto dhalashada Frogmore Cottage ee Windsor.
Meghan wuxuu dhalan karaa guri ku yaala Frogmore Cottage (Sawirka: PA)
Insider waxa uu sheegay inay ahayd doorasho ka dib markii hore haweeney u dhalatay dalka Mareykanka "u baxsatay" intii uu uurka lahaa.
Wargeyska ayaa u sheegay Daily Mail: "Waa doorashadiisa ugu fiican, lakiin waxa ay sidaasi ku xiran tahay sida ay xaaladu u soo dhawaato waqtiga. "
Isbitaalka Frimley Park ee Surrey, halkaas oo Tirada Wessex ay u dhashay caruurteeda, ayaa sidoo kale lagu soo jeediyay inay u dhowdahay guriga cusub ee Meghan iyo Harry.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) SUNDAY EXPRESS
Afrikada Fashion Show 13: Golaha Congress Archicomble - Abidjanshow.com
Wasiirkii hore ee argagaxisada, Christian Quesada's-sharciyada ka marag furay: iibso Closer